ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »4တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲများအတွက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 19 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ပထမဦးစွာရက်စွဲများကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲရန်အလားအလာရှိသည်. ငါသည်သင်တို့ကိုလက်ရှိတဦးပြင်ဆင်နေဆိုရင်သဘောပေါက်, အခုနပြောသလိုကိုယ့်အစာအိမ်ကို Flip ကိုဖန်ဆင်း, ကြောင်းကို၎င်းငါဆိုသည်တောင်းပန်ရန်! တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲသို့ဝငျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအနားယူရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ဘဝတစျခုလုံး-ပြောင်းလဲနေတဲ့ရှုထောင့်ကိုမေ့လျော့. အဲဒီအစား, စကားပြောခန်းကိုအာရုံစိုက်ကြည့်ရအောင်.
ဒါကြောင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, ကျွန်တော်တို့အလုပ်အင်တာဗျူးများတူပထမဦးဆုံးရက်စွဲများစဉ်းစား, သောဆက်ဆက်ပျော်စရာလုံးဝအထောက်အကူမပြုတဲ့ဓမ္မစိတ်ဓါတ်များနှိမ့်ချ, နှင့်အလုပ်အကိုင်အမေးမြန်းခန်းအသုံးအများဆုံးတုံ့ပြန်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်, မှန်သော? ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်အာရုံကြောနေရတဲ့အခါ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့စွန့်ပစ်သကဲ့သို့အရေးပါဆုံးစကားပြောဆိုမှု tool ကိုမေ့လျော့: နားထောင်ခြင်း.
ဤရိုးရှင်းသောမှုတ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအံ့သြလောက်အောင်ကျဲင်. ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားလူတစ်ဦးအတွက်အပြည့်အဝညှိရန်လစျြလြူရှုသောငါတို့လိမ္မာမှတ်ချက်တွေသို့မဟုတ်စုံလင်သောပေးအပ်ခြင်းပြင်ဆင်နေအပေါ်အရမ်းအာရုံစူးစိုက်. ငါကြီးမြတ်တယောက်ကှနျ့အများကြီးကြားဖူးတယ်, ငါရယ်စရာတွေကိုချစ်, သို့သော်အဘယ်တကယ်တော့သင်ဘာပြောတာလဲနားထောင်ခဲ့သူတွေအကြောင်း? ကောင်းစွာ, သူထိနျးင်. သူရယ်စရာင် အကယ်., လည်း, ပြီးနောက်သင်ထီပေါက်အလေးအနက်ထား hit င်.
အမျိုးသားများစကားကိုနားထောင်သောသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ချင်တယ်, လွန်း! ကိုယ့်ကိုသူကပြောပါတယ်စကားကိုကြားလျှင်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, တစ်ဦးဝေဖန်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်. တကယ်တော့သူ၏စကားကိုနားထောငျ, သူ့ရဲ့လေသံ, သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား, နှင့်သူ၏လုပ်ရပ်. အမျိုးသမီးများသည်အလွန်ကောင်းစွာဤအရာများကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများအပေါ်, ကျွန်တော်တို့အဖန်ဖန်မိမိကိုယ်ကိုအပေါ်ထို့ကြောင့်အာရုံစိုက်ရ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့်စားဆင်ယင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆံပင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံသွားခဲအတွက်အစာ, အဘယ်သူသည်နိုင်ငံများ, နှင့်နှုတ်ခမ်းနီ reapplications) ကျနော်တို့အဲဒီမှာကယ့်ကိုပါပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေ့လျော့သော.
သင်၏ရက်စွဲနားထောင်ခြင်းစကားဝိုင်းမှာစီးဆင်းမှုကိုကူညီလက်တွေ့အာမခံချက်ဖြစ်ပါသည်. မကောင်းတဲ့နားထောင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု, လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရိုက်ထည့်ပါ? ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖော်မြူလာင်:
1. မေးခွန်း: သင်နားမလည်ကြောင်းအလုပ်တာဝန်များကိုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. အကယ်. သင့်ရဲ့နေ့စွဲဆွေးနွေးပွဲ, သို့မဟုတ်အမိန့်သည်သင်၏မကြားဖူးပေမယ့် menu ကိုပယ်ရာတစ်ခုခု, မေးခွန်းများမေးရီစရာမခံစားရဘူး. ရှားအမေး. လူတွေကသူတို့အကြောင်းအများကြီးသိသောအရာကိုရှင်းပြဖို့ကိုချစ်, နှင့်သင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးသို့သင့်ရဲ့နေ့စွဲပဲလှည့်ပြီးပြီ, ကကားအင်ဂျင်သို့မဟုတ်ဆူရှီအပေါ်င်ရှိမရှိ. အဘယ်သူသည်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကဲ့သို့ခံစားချင်ပါဘူး? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိလေသာအကြောင်းအများကြီးပိုပြီးစကားပြောလေ့, ဒါကြောင့်သင်ကအဓိပ္ပါယ်ရှိသောလမ်းအတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားသိမ့်ပါတယ်.
2. ဆိုင်းငံ့: သင်၏ရက်စွဲအချိန်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အကြံအစည်ပြီးမြောက်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းတော်တော်လေးစံဖြစ်ပါသည် - နှငျ့သငျစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်အာရုံကြောနေသည့်အခါခက်ခဲသက်သေပြနိုင်သည် - မဟုတ်တဦးတည်းခြေလှမ်းဝေးတဲ့ကြောင့်ယူပြီးတကယ်သတင်းအချက်အလက်ပေးနိုင်ပါသည်. လူတစ်ဦးတစ်ဦးအတွေးပြီးသွားသည်အတိုင်းဤအကျင့်ကိုကျင့်တစ်ခုမှာကြီးမြတ်လမ်းရေတစ်ငုံအရင်သောက်နေပါတယ်. ဒါဟာလူဖြည့်ဖို့တိတ်ဆိတ်စွာပေးသည်, သင်တို့သည်ဤ Inclusive မှသူတို့ကိုအကြောင်းပိုသိလာအောင်နဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာ.
3. စာနာတတ်: ဒီတစ်ခါလည်းသူမပဲသူမ၏ဒီဂရီကိုလက်စသတ်, သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသူတစ်ဦးမြှင့်တင်ရေးတက်သည်င်. သင်သည်ထိုအနေအထားတွင်ခံစားမိမယ်လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ. သင်ဟာသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအတန်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်လို, သင်သည်အဘယ်သို့လယ်ပြင်၌လုပ်လို, သင်လှေကားကိုတက်မှအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စီမံကိန်းများကို. ယခုတွင်သင်သည်အလွန်ကြီးစွာသောမေးခွန်းများ. ဤသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စဉ်းစားတွေးခေါ်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေသက်သေပြနိုင်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးအခါသမယဖြစ်ပါသည်.
4. repeat: သင်အံသွားခဲ၌စိုက် broccoli ရှိသည်နှင့်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအတွင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းအဘို့အဆင်ကန်းတောတိုးခံစားနေစဉ်ပဲသူ့အလုပ်သူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့မတတ်နိုင်သောကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုရင်, အလွန်အနည်းဆုံးသော့ချက်စကားလုံးများကိုပေါ်တက်ခူးဖို့ကြိုးစား. သူဒေတာ entry ကိုပွောခဲ့? ယခုတွင်သင်သည်ဒေတာဘယ်လိုအကြောင်းမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်, ဤသူသည်ချစ်သောသူတစ်ခုခုပါလျှင်, သို့မဟုတ်သူကဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကဖိန်းဓာတ်၏ဒြပ်ထုပမာဏကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက. ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသား, အခါသင်တတ်နိုင်သမျှအကျစ်လစ်သိပ်သည်းမေ့လျော့, ရုံသူ့ကိုမေး!
ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့နေ့စွဲရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လောက်မေးခွန်းများမေး(့) အကြံပြုသည်. မတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ကိုနှစ်သက်? စစ်ဆေးခြင်း, ကျေးဇူးပြု. ငါ၌ဤဆိုရ (နှင့်မျိုးအလေးအနက်ထား။)
သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲခံစားပျော်မွေ့, သက်တောင့်သက်သာနေပါ, ပျော်စရာရှိသည်! ရုံနားမထောငျဖို့သတိရပါ. တကယ်တော့ပြောင်းလဲမှုအတွက်သင့်အသက်တာကိုမေလ, ဒါပေမယ့်ဟေး, အဘယ်သူမျှမဖိအားများ.
ဟာဝိုင်ယီကျွန်း – သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်အတူ Visting